Amanqaku kaPJ Taei malunga Martech Zone |
Amanqaku ngu UPJ Taei
I-PJ ngumseki kunye nomongameli we-Uscreen, yonke-in-nye iqonga elenza imali exhobisa oosomashishini kunye nabadali ukuba benze imali ngomxholo wabo kwaye bakhe uluntu oluhlumayo kunye namashishini ajikeleze iividiyo zawo.
NgoLwesibini, Agasti 27, 2019 NgoLwesibini, Agasti 27, 2019 UPJ Taei
Kukho esona sizathu sisiso sokuba ubhaliso kwiVidiyo kwiMfuno (i-SVOD) iqhuma kwangoku: yile nto abantu bayifunayo. Namhlanje abathengi abaninzi bakhetha umxholo wevidiyo abanokukhetha kunye nokubukela kwimfuno, ngokuchasene nokujonga rhoqo. Kwaye izibalo zibonisa ukuba i-SVOD ayicothisi. Abahlalutyi baqikelela ukukhula kwayo ukufikelela kwinqanaba lababukeli abazizigidi ezingama-232 ngowama-2020 e-US. Ukujongwa kwehlabathi kulindeleke ukuba kuqhume kuye kwizigidi ezingama-411 ngowama-2022, ukusuka kuma-283